Ifulethi ngenhla kwehhotela le-SPA eduze kwase-Old Town Parking YAMAHHALA
Tallinn, Harju maakond, i-Estonia
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Siim
Sikunikeza indawo entsha engamamitha-skwele angama-60 enegumbi lokulala elilodwa eduze kwaseTallinn's Old Town. Ine-balcony kusuka lapho uzoba nombono omangalisayo ukusuka esitezi sesi-5 ukuya esigcawini sase-Rotermanni esimatasa. Ifulethi lisebhilidini elifanayo kanye nehhotela elisha sha iMetropol Spa elinesikhungo se-SPA kanye ne-Wellness.
Ifulethi lisenkabeni yedolobha endaweni ethokomele yangaphakathi ye-Rotermanni ehlonishwayo, kude nomsindo wethrafikhi oqondile. Idolobha Elidala laseTallinn lisendaweni eyibanga lokuphonsa itshe.
Leli fulethi elilodwa lokulala lifakwe emazingeni aphezulu kakhulu ukuze likunikeze ikhaya eliphelele kude nesipiliyoni sasekhaya!
Lesi sakhiwo sakhiwe ngo-2018 futhi singesinye sezinhlobo kulo lonke elase-Estonia njengoba sihlanganisa indawo yokuhlala kanye nehhotela le-Spa. Ihluke kakhulu futhi ifaneleka kakhulu njengoba izivakashi zithola kalula indawo ye-spa nempilo yehhotela evulwa izinsuku ezingu-7 ngesonto.
I-SPA ihlanganisa ama-saunas amane ahlukene kanye nechibi kanye nama-jacuzzi lapho ungakhetha khona phakathi kwezindlela zokwelapha ezihlukahlukene zobuhle nezokuphumula.
Sicela uqaphele ukuthi indawo yokungena efulethini kanye nehhotela ivela ezinhlangothini ezihlukene zesakhiwo futhi ihhotela nesikhungo sezempilo singafinyelelwa ngehhotela noma ngendawo yokupaka engaphansi kusetshenziswa amakheshi.
Ifulethi linefenisha ephelele futhi linezinto zonke. Ifulethi lifakwe ukufudumeza okungaphansi futhi ama-thermostat anika amandla ukulungisa izinga lokushisa ekamelweni elithile. Ifulethi linefoni yevidiyo ekuvumela ukuthi uvule umnyango omkhulu wesakhiwo usuka efulethini.
Igumbi lokugezela libanzi futhi lihlome ngazo zonke izinsiza ezidingekayo kanye neshawa yemvula yokuhamba ngezinyawo, umshini wokomisa izinwele kanye ne-washer-dryer.
Igumbi lokuhlala linosofa womklami omkhulu owenzelwe ngokwezifiso kanye ne-LG 4K OLED TV engu-65 intshi (okuhlanganisa ne-Netflix mahhala). Futhi izikhulumi ezinkulu zekhwalithi ephezulu ze-Yamaha zixhunywe nomamukeli ukuze zibe nesipiliyoni esimangalisayo sesinema ekhaya. Ifulethi line-WiFi yamahhala (isivinini se-Wifi ngu-200 Mbps).
Ifulethi linethuba lokulala labantu abathathu. Igumbi lokulala linombhede osayizi wendlovukazi (160x200 cm). Igumbi lokuhlala linombhede omkhulu omise okwe-L lapho ungajabulela khona isipiliyoni sesinema noma ongawusebenzisa njengombhede owengeziwe. Kokubili igumbi lokulala negumbi lokuhlala linamakhethini omklami enziwe ngokwezifiso avimbela ukukhanya azokuqinisekisa ukulala okungcono kakhulu kwakho ngisho nangezinsuku ezikhanya kakhulu.
Ikhishi lihlome ngokuphelele: umshini wokugeza izitsha, ifriji elinefriji, i-oven-microvawe, ihob/isitofu, umshini wekhofi weNespresso (amaphilisi ekhofi anikeziwe - 1pcs ngosuku isivakashi ngasinye), igedlela likagesi, i-blender yama-smoothies nazo zonke izingubo zokupheka ezidingekayo. ukwenza isidlo esimnandi noma ukubhaka ikhekhe.
Ifulethi futhi ine-robot vacuum-cleaner ezokwenza iphansi lihlanzeke ngenkathi ungekho (vele uliqale ngaphambi kokuthi uhambe).
Ifulethi lifanele abenzi bamaholide, imindeni, izithandani, noma izakhamuzi zesikhashana zamabhizinisi/zikahulumeni.
Indawo yokupaka: Kukhona indawo yokupaka YAMAHHALA efakwe efulethini endaweni yokupaka engaphansi kwemoto eyodwa kuphela.
Indawo yokupaka ekhokhelwayo ngaphandle kwezakhiwo: Izindawo zokupaka eziseduze kakhulu ziphambi komnyango futhi zibiza u-1,25Eur/30min noma u-60€ ngamahora angama-24.
Ifulethi litholakala esikhungweni saseTallinn, engxenyeni yesimanje yedolobha: Rotermanni Quarter, kude nomsindo wethrafikhi oqondile. Kuwuhambo lwemizuzu engu-1 nje ukusuka e-Old Town, uhambo lwemizuzu eyi-11 ukuya esikhumulweni sesikebhe. Yonke into ihambe imizuzu embalwa nje - izindawo zokudlela ezihamba phambili, amathilomu angaphandle ehlobo, izindawo zokucima ukoma, amakilabhu, izikhungo zokuthenga, icinema. I-SPA itholakala endlini efanayo. I-Rotermann Quarter ehlanganisa konke, esesitayeleni ehlonipha umlando wayo ihlukile kakhulu futhi kufanelekile ukuyivakashela.
Lesi sakhiwo sikwenye yezindawo ezikalwe kahle kakhulu eTallinn! Izivakashi zijabule ngakho uma kuqhathaniswa nezinye izakhiwo endaweni. Izivakashi zithola kakhulu ngemali yazo uma ziqhathaniswa nezinye izakhiwo kuleli dolobha.
Ifulethi lonke lisebenzela wena, jabulela!
Sicela ungangabazi ukubuza noma yiziphi izincomo nosizo ngaphambi noma ngesikhathi sokuhlala kwakho noma ukushintsha izikhathi zokungena/zokuphuma uma kudingeka. Izikhathi zokungena/zokuphuma eziqinisekisiwe zizolandelwa kuphela kushejuli yokubhuka eqinile.
Ngingahle ngingabi khona ngaso sonke isikhathi e-Talllinn ngenxa yomsebenzi wami kodwa nginomsingathi wami owusizo kakhulu ohlale engisiza nezivakashi zami uma kunesidingo.
Sicela ungangabazi ukubuza noma yiziphi izincomo nosizo ngaphambi noma ngesikhathi sokuhlala kwakho noma ukushintsha izikhathi…
USiim Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Tallinn namaphethelo